2 dambiile oo toogtay mudane ka tirsan baarlamaanka Puntland oo la qabtay. – Radio Daljir
Janaayo 5, 2010 12:00 b 0
Bossaso, Jan 05 – Cabdullahi Cali Kaarad, mudane ka tirsan golaha wakiilada Puntland, ayaa caawa lagu dilay magaalada Bossaso. Alle ha u naxariistee, marxuumka ayaa la sheegay in ay toogteen 2 nin oo hubaysan, xilli uu sii galayey mid ka mid ah masaajidda magaalada Bossaso.
2-da dambiile ayaa isku dayey in ay baxsadaan kadib fal-dambiyeedka ay gaysteen.
Shacabka magaalada ayaa ka gadooday fal-dambiyeedkan ay gaysteen 2-da dambiile, iyada sida ay sheegeen dad goobjoogayaal ahi shacabku ay raacdaysteen, kuna guulaysteen in ay isla goobtii ku qabtaan mid ka mid ah dambiilayaasha.
Dambiilaha kale ayaa la sheegay in uu gabaad ka dhigtay, kuna dhuuntay guri, halkaas oo dadweyne caraysani ay isku-weer ka qabteen, deetana ciidanka bilaysku ay xoog ku galeen, dabiilahana xabsiga u taxaabeen.
Mudanaha la dilay ayaa laga soo doortaa gobolka Bari.
2-da dambiile ee la qabtay ayaa la sheegay in ay ka soo jeedaan gobolka Sanaag.
Waa dhacdadii 2-aad ee mudane ka tirsan golaha wakiilada lagu dilo gobollada Puntland.
Hore ayaa wasiir iyo tiro dad indheergarad ah lagu dilay magaalooyinka waaweyn ee Puntland.